नेकपा एकताः प्रचण्ड सिउँदै जाने, ओली उधार्दै जाने - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
२०७७ कार्तिक २, आईतवार १७:५०:००
पोहोर साल खुसी फाट्दा जतन गरी मनले टालें
त्यही साल माया फाट्यो, त्यसलाई पनि मनले टालें
यसपालि त मनै फाट्यो, केले सिउने केले टाल्ने हो
अरुणा लामाले गाएको यो गीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ साउन २०७३ मा संसदमा गुनगुनाएका थिए ।
त्यो संसद संविधानसभाबाट रुपान्तरित भएको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र सभामुख फेरिएका थिए ।
राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्रीमा ओली र सभामुखमा ओनसरी घर्ती निर्वाचित भए । तत्कालीन माओवादीको सहयोग लिएर कांग्रेसलाई विपक्षी कित्तामा पुर्‍याउँदा एमालेलाई यो दोहोरो लाभ भएको थियो ।
जबकि, तत्कालीन संसदको पहिलो शक्ति कांग्रेस थियो । दोस्रो एमाले र तेस्रो माओवादी । दोस्रो र तेस्रो मिलेपछि पहिलो शक्ति सत्ताबाहिर परेको थियो ।
तर ओलीको शक्ति अभ्यासको शैली अहिलेको भन्दा खासै भिन्न थिएन । त्यसबाट आजित भएपछि माओवादी नेता प्रचण्डले समीकरण उल्टाइदिए । कांग्रेससँग मिलेर ओलीलाई सडकमा पुर्‍याए । आफूले गद्दी सम्हाले ।
प्रचण्डको चिरा परेको मन सिउन अनेक यत्न गर्दा पनि सम्भव नभएको ओलीको आशय थियो त्यतिखेर ।
प्रायः इतिहास दोहोरिन्न भन्छन् । तर, नेपालमा बारम्बार दोहोरिएको छ । जनता बारम्बार सडकमा आएका छन् । व्यवस्था बारम्बार उल्टिएको छ ।
समीकरण उथलपुथलमा एउटै सूत्रले बारम्बार काम गरेको छ । एउटै गल्ती नेताहरुले पटकपटक दोहोर्‍याएका छन् । जनताले पटकपटक धोका खाएका छन् ।
त्यस्तै ओली र प्रचण्डको फाटेको मन पनि फेरि सिउन नसकिने अवस्था आएको छ । जब एउटाले सिलाउँदै जाने, अर्कोले उधार्दै जाने हो भने सिलाउनुको अर्थ पनि रहँदैन । एउटै कपडा अन्त्यहीन तवरमा सिलाइ कटाइमा प्रयोग गर्न पनि सकिँदैन ।
करिब फुटको डिलमा पुगिसकेको र ठाउँठाउँमा निकै गहिरा धाँजा फाटिसकेको नेकपामा सिलाइ हाल्न नखोजिएको होइन । धागो चिनियाँ परेर वा अरु कुनै कारणले हो, अब सिउन पनि नसकिने अवस्थामा पुगेको छ ।
ओलीले पार्टी एकता हुँदाको सम्झौताअनुसार सरकार र पार्टीमा भूमिका नदिएको भन्दै प्रचण्डले असन्तोष पोख्न लागेको गत वर्षदेखि नै हो ।
अझ उनी भारत र चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि आफूमा केही कार्यकारी अधिकार होस् भन्ने चाहन्थे । उनको त्यो चाहनाका पछाडि चीनमा उचित सम्मान र महत्व नपाउनु पनि थियो ।
फर्केर आएपछि उनले केही खेलकूद पनि गरे । ओली स्वीट्जरल्याण्डमा इकोनोमिक फोरमको बैठकमा गएका बेला यता धोवीघाट भेला भएको थियो । त्यसबाट रुष्ट ओलीले उतैबाट जवाफ फर्काएका थिए ।
बढ्दै गएको विवादले उग्ररुप लिएपछि प्रचण्डले पार्टी एकता हुँदाको गोप्य सम्झौतापत्र नै सार्वजनिक गरिदिए । त्यसपछि गत मंसिरमा सचिवालय बैठक बस्यो । बैठकले प्रचण्डलाई नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने भन्यो । त्यसमा प्रचण्डले चित्त बुझाए । विवाद मत्थर भयो ।
तर त्यो निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै ओलीले टेलिभिजनमा गएर आफू नै वरिष्ठ अध्यक्ष भएको, पार्टीमा आफ्नै निर्णय अन्तिम हुने र प्रचण्ड अर्को अध्यक्ष रहेको भन्दै होच्याए ।
त्यसपछि प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पनि पाएनन् । बैठकमा समेत ओली आफू गजधम्म राजगद्दीमा जसरी बस्थे, प्रचण्डलाई दर्शकदीर्घामा फोम समेत नभएको कुर्सीमा राख्थे ।
कुर्सी पनि कहिले कतै, कहिले कतै हुन्थ्यो । कुनै निश्चित ठाउँ नभएपछि कुर्सी खोजेर बस्नुपथ्र्यो । त्यसबाट अमानीत महसूस गरेका प्रचण्डको रिसको पारो चढ्दै गएको थियो । तर, पार्टी एकता नबिथोलियोस् भनेर सहेरै बसे ।
गएको फागुनमा ओली सरकार दुई वर्षमा प्रवेश गर्‍यो । संविधानअनुसार अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्ने भयो । केही होटलहरुमा प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र उपेन्द्र यादवका बैठक पनि चले ।
यसबाट ओली थप सशंकित भए । आफ्नै पार्टीका नेताहरु भारतीय इशारामा चलेको र सरकार ढाल्न लागेको आरोप ओलीले सार्वजनिक रुपमै लगाए । यसले नेकपामा ठूलै चिरा पार्‍यो ।
होटलहरुका बैठकबारे सूचना पाएका ओलीले आफूविरुद्धका चलखेल असफल बनाउन गत वैशाखमा एकाएक राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिनै निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश ल्याए ।
त्यसले नेकपामा थप धाँजा फाटे । पार्टी विभाजनकै डिलमा पुगिसकेको हो त्यतिखेर । प्रचण्डको दबाबमा ओलीले ती अध्यादेश फिर्ता लिए । त्यसपछि प्रचण्डले पनि सुझबुझ देखाए । मुद्दा थप चर्काएनन् । त्यतिखेर च्यातिएको मन त्यत्तिकै टालटुल पारियो ।
ओलीको कार्यशैली नसुध्रिएपछि गत असारमा असन्तुष्ट समूहकै दबाबमा स्थायी समिति बैठक बस्यो । त्यो बैठक ८० दिन चल्यो ।
बैठकमा प्रचण्ड र माधव नेपालले ओलीको राजीनामा मागेका थिए । ओली एकलौटी ढंगले चलेको, राष्ट्रिय महत्वका विषय र वैदेशिक सम्बन्धमा असर पर्ने विषयमा समेत कुनै सल्लाह नलिएको र एकताको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको पार्टीको संवेदनशीलता नबुझेको लगायतका असन्तुष्ट खेमाको सरोकारलाई अवमूल्यन गरेको लगायतका आरोप असन्तुष्ट पक्षको थियो ।
विवाद र शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेपछि ओली र प्रचण्ड करिब भेट नहुने बाटोमा त्यसबेलै पुगिसकेका हुन् । झण्डै ८० दिन चलेको स्थायी समिति बैठक अन्ततः सम्झौतामै टुंगियो । प्रचण्डले फेरि कार्यकारी अध्यक्षता गर्ने भनियो । गत मंसिर ४ कै सहमति पुनः दोहोर्‍याइयो ।
यही बैठकका निर्णय कार्यान्वयनबारे छलफल चल्दै थियो । तर ओली कार्यान्वयन गर्न तयार भएनन् । बरु एकलौटी रुपमा थप नियुक्ति र निर्णय गर्न थाले ।
युवराज खतिवडा र लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत बनाएर नेतृत्व पंक्तिमा अविश्वास र आशंकाको रेखा कोरे । त्यसमा पनि प्रचण्डले सम्झौता गरे र विवाद टालटुल पारे ।
केन्द्रमा टालटुल पारे पनि कर्णालीतर अर्को ताल फुस्कियो । प्रचण्डपक्षीय मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ओलीपक्षीय नेताको अगुवाइमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो ।
भोलिपल्टै बिहानै ओलीकहाँ गएर प्रचण्डले त्यो पनि टालटुल पार्न खोजे । अविश्वासको प्रस्ताव स्थगित गर्न लगाए । उनी त्यहाँबाट खुमलटार पुग्न नपाउँदै ओलीले अर्को झट्का दिए, आफूनिकटका तीन नेतालाई मन्त्री नियुक्त गरेर ।
प्रचण्ड यसपालि त मनै फाट्यो भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । कति सिउने, कति टाल्ने ? कहाँ सिउने, कहाँ मात्र टाल्ने ? असन्तुष्टि र विवाद तन्किँदै छ ।
सिलाउने प्रयास कतैबाट भएन भने यसपालि मनै फाट्नेछ, सिलाउनै नसकिने गरी । धाँजा फाटेको पार्टीमा सिलाउने सियो र जोड्ने धागो पनि अब कुनै बजारमा पाउन मुस्किल छ ।
त्यो अवस्थामा ओलीसँग गाउनका लागि अरुणा लामाको गीत पनि बाँकी नरहन सक्छ । बरु अरुले नै भन्न सक्नेछन्, दु:ख पाइस् मंगले आफ्नै ढंगले ।